Mustaqbalku Waa Hadda: Is-dul-dhigida Musiibo Joogto ah iyo Gargaar Is-dhaafsi ah Istaraatiijiyadda Badbaadinta - Gargaarka Musiibada ee Gargaarka
Bogga ugu weyn/updates/Mustaqbalku hadda waa: Isdulsaar Musiibo Joogto ah iyo Gargaar Is-dhaafsi ah Istaraatiijiyadda Badbaadinta
Weli waxaan ku jirnaa duufaanno iyo xilliyadii dabka, horeyna 2020 waxay sanad taariikhi ah ugu noqotay tirada, baaxadda, iyo saameynta masiibooyinka. Dabka ayaa ka gubanaya guud ahaan Xeebta Galbeed. Duufaanno ku dhuftay Xeebta Gacanka. Faafa coronavirus wuxuu sii wadaa inuu keeno khasaaro baahsan, dhimasho, iyo khalkhal dhaqaale oo aan la xakamayn. Siyaasad ahaan, ismariwaaga ka taagan gargaar kasta oo dowladeed waa musiibo lafteeda, taas oo wali ah mid aan culeys saarin marka loo eego nabaad-guurka sii kordhaya ee xeerarka dimoqraadiga ah ee inagu soo dhoweynaya kali talisnimada. Xagjirnimada caddaanka ah ee jidadka iyo hoolalka awoodda waxay dambi ka dhigaan oo dilaan meydadka madow iyo dibadbaxayaasha iyada oo aan la ciqaabin. Ma jiro daqiiqad laga murugoodo dhibaatadii ugu dambeysay ee wadareed ka hor inta aan mid kale nala horkeenin. Iskudarka masiibooyin badan ayaa si dhakhso leh u noqday wax caadi ah. Waxaanan ognahay dhibaatooyin badan oo saameyn badan leh oo masiibooyin iyo masiibooyin ay weli imaanayaan.
Waxaan indha indheynay mustaqbalka. Musiibo joogto ah, haa. Laakiin sidoo kale mashaariic fara badan oo is-kaashanaya iyo shabakado na wada dhex maraya isla markaana dib u milicsanaya wax kasta oo isku dayaya inaan badbaadinno oo keliya nolosha sida aan ku naqaanno meerahan, laakiin sidoo kale aan u horseedno xilli caddaaladda cimilada, caddaaladda jinsiyadda, caddaaladda dhaqaalaha, caddaaladda jinsiga, nabadda deegaanka iyo caddaaladda, iyo madax-bannaanida asaliga ah. Waxay si dhakhso leh ugu caddahay dad badan iyo in ka badan in kuwani ay yihiin shuruudaha looga baahan yahay badbaadinteenna wadareed.
Farshaxankan quruxda badan waxaa curiyay Molly Costello
Inta lagu jiro musiibadan oo dhan, diidmada rajadu waa mid faafa oo wararka ku saabsan dadaallada is-kaashiga ee wadajirka ah ee waddanka oo dhan waa kuwo aan dhammaad lahayn: barnaamijyada wifi balbalada, qaboojiyeyaasha bulshada, maktabadaha amaahda qalabka, xarumaha is-weydaarsiga ee diy, qeybinnada maaskarada, dhacdooyinka ka hortagga pullover, gaarsiinta cuntada bakhaarrada. barnaamijyada, xirmooyinka daryeelka daawada geedaha, shaqaalaha difaaca ee guriga laga saarayo, lacagaha damaanada. Shabakad ballaadhan oo fikrado iyo waayo-aragnimo ah ayaa soo kordheysa; dadaallada waa lagu daydaa oo la sifeeyaa, talada waxaa lagu gudbiyaa cilaaqaadyada la daneynayo. Mid kasta oo ka mid ah dadaalkeennu wuxuu iftiiminayaa awoodda aan u leenahay helitaanka iyo bixinta daryeelka si wax ku ool ah, dusha sare, iyo wadajir ah
Hadday tahay DSA SW Louisiana or Golaha Dadka ee Xeebta Dhexe bixinta gargaar wada jir ah kadib duufaannadii ka dhacay koonfurta, Gargaarka Wadajirka ah ee Magaalada Iowa iyo U doodayaasha Caddaaladda Bulshada kajawaabida caawinaada wadajirka ah ee laga soosaaray Iskuullada Midwest, kooxaha sida Calaamadaha PDX, Wadajirka Waxqabadka ee Willamette, Maska Maska, iyo kuwa kale oo aan tiro lahayn oo ku hawlan iska caabinta dabka galbeedka, ama kumanaan ahaan mashaariicda gargaarka wadajirka ee coronavirus ubax leh jihooyin aan la koobi karayn meel kasta - dhaqdhaqaaqa isu-gargaarida ayaa la kulmay xilligan.
Dhaqdhaqaaqa isu gurmashada inta lagu jiro musiibooyinka maahan wax la allifay Gargaarka Gargaarka ee Musiibada ah. Laakiin waxaan ka shaqeyneynaa inaan u dhaqano sidii mindi ciidan swiss ah dhaqdhaqaaqan sii kordheysa ee dhaqdhaqaaqa maadaama ay aad iyo aad muhiim ugu sii ahaaneyso badbaadadeena wadareed. Waxaan tan ku sameeynaa annaga oo taageerna, kor u qaadno, oo aan lashaqeyno iskaashi lala yeesho mashaariicda iskaashiga ah sida kuwaan, iyo sidoo kale si toos ah kuwa ka badbaada musiibada oo nagu hagaya waxa, meesha, iyo sida ugu wanaagsan ee looga jawaabi karo baahidooda is-go'aaminta ah. Dhageysigu wuxuu inagu hoggaaminayaa inaan ku kala duwanaano duruufaha kala duwan. Annaguna waxaan nahay barashada intaan wadooyinkan wada soconno.
Dadku meelkasta oo ay joogaan waxay ka sii qoto dheer xididada is caawinta. Waxaan si gaar ah u dooneynaa inaan sare u qaadno dhacdooyinka khadka tooska ah ee lamaanaha: West Street Recovery waxay u dabaaldegi doontaa seddex sano oo soo kabasho iyo adkeysi shaqo dhisme kadib duufaantii Harvey iyadoo heysata seddex guddi oo ku saabsan shaqadooda Oktoobar 16-17. Faahfaahin dheeraad ah halkan. Symbiosis-na waxay ku sameyneysaa websaydho taxane ah oo ku saabsan laba awoodood oo loo yaqaan 'Bottom-Up Democracy': Laga soo bilaabo Dhibaatada illaa Nidaamka Isbedelka iyadoo loo marayo Awoodda Labada, rikoodhada ayaa la heli karaa halkan.
Caalamka, sidoo kale, dadaalada gargaarka masiibada ee ku saleysan gargaarka labada dhinacba way sii kordhayaan xitaa iyadoo dowladaha ay cadaadinayaan dadaalkooda. Miyiga waqooyiga Oaxaca, oo ay ka tagtay dowladda daadad xoog leh ka dib, ayaa bulshada ayaa isu imanaysa si loo daboolo baahidooda aasaasiga ah ee nolosha iyo dhismaha jikooyinka bulshada. Filibiin dhexdeeda, sharciga cusub ee ladagaalanka argagixisada ee taageeraya qabqabashada dadka u dhaqdhaqaaqa halkudhiga qeexitaanka mugdiga ah ee "argagixisada" oo xitaa ay kujiraan dadaalada gargaarka bina'aadanimo ee aan dowladu saarin. lagu tartamo shabakad ballaadhan oo fowdo ah oo u heellan mashaariicdooda kaalmaynta ah isla markaana ay diiwaangeliyeen saaxiibadood at Istuudiyaha burcad-badeedda. Lubnaan, shabakadaha jawaabta aasaasiga ah iyo dadaallada gargaarka ayaa soo ifbaxay qaraxii ugu dambeeyay iyo kacaankoodi oo dhan, iyadoo xubnaha bulshada ay ku laabteen dhaqammadii soo jireenka ahaa ee beerashada isla markaana ay la kulmeen baahiyaha bulshadooda iyadoo ay jirto hilib la’aanta dalka, dhibaatada dhaqaale, iyo dhibaatooyinka kale. Gudaha Italy, Iyo Iswidhan dadaalada la midka ah ee ka hortagga musiibada ayaa sii kordhaya. Iyo xisaabaadyo badan oo dhiirrigelin ah, oo ah kuwii ugu horreeyay ee gacan-ka-hadalka ee coronavirus-ka ee adduunka oo dhan ayaa lagu qoray buugga ugu dambeeyay ee uu qoray Colectiva Sembrar: Midnimo Midnimada.
Waxa horyaala waa cabsi. Way adkaan kartaa in la qiyaaso sida aan ku heli doonno xoog iyo tamar si aan ula kulanno dhibaatooyinka soo socda ee aafada ee qabowga xilliga qaboobaha, xilliga doorashada ee geeska, iyo aafooyinka kale ee intaas dhaafsan. Laakiin waxaan ka heli doonnaa wadadeena wax walba oo soo socda oo wada socda, haddii ay jirto hal shay oo aan isku halleyn karnona marka ay musiibo dhacdo, waa inaan si isdaba joog ah isugula yaabanno xariifnimadeenna iyo adkeysigeenna.
Sii wad raadinta habab cusub oo aad isku daryeesho, sii wad daryeelka naftaada, oo aad usii wado kordhinta xiriirada kugu hareeraysan. Hareeraha duufaannada, suugaan ahaan iyo tusaalooyin ahaanba, ficilladani waa jiheeyahayaga, oo nagu hagaya guriga.